Waini 3 ichaunza rutsigiro kune Android zvinoshandiswa | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yezvakakosha uye zvinodikanwa zvekuwedzera kune avo vanobva kuMicrosoft masisitimu anoshanda kana avo vachiri kushanda neWindows, ndiWine. Waini inomiririra iyo inotibvumidza kumhanyisa Windows zvirongwa pane yedu Gnu / Linux kugovera uye kunyange inotibvumidza kumhanya Windows zvishandiso paMacOS. Asi izvi zvichachinja neshanduro hombe inotevera.
Vagadziri vewaini vakasimbisa kuti waini 3 ichaunza chinhu chitsva uye ndezvekuti haingotsigire maapplication eWindows chete asi inoenderanawo nemaapplication eApple.
Parizvino chete kunyorera kweGnu / Linux kunotibvumidza kuisa Android kunyorera pakombuta yedu neGnu / Linux. Ichi chishandiso chinonzi CrossOver uye kunyangwe chiine chiedzo vhezheni, chokwadi ndechekuti CrossOver mhinduro yevaridzi uye haipindirani nevazhinji vashandisi. Pamwe nekuda kwayo, Vagadziri vewaini vakasarudza kuisa chimiro ichi kune chinotevera Waini 3.
Waini 3 inobvumidza MacOS uye Gnu / Linux kushanda neApple maapplication
Waini 3 inotarisirwa kuburitswa kuruzhinji kutanga kwa2018, vhezheni ichakwanisa kumhanyisa Android zvinhu asi kwete zvese, kureva kuti, Google apps kana izvo zvinoda Google services havazokwanise kushanda neiyi vhezheni yeWine. Raibhurari yeMicrosoft ichagadziridzwa zvakare uye Waini 3 ichaenderana neDirect3D 12 uye Vulkan, akakosha ekuwedzera-ekupa uye nekumhanyisa graphic application.
Parizvino, isu hatina sarudzo yekuwana iyi vhezheni muGnu / Linux yedu asi tinogona kushandisa zvinyorwa vagadziri kuti vave neshanduro nyowani mukuparadzira kwedu kana ichiwanikwa. Chero zvazvingaitika, kana tikasashandisa maapplication eApple, dambudziko harisi rakakomba uye kana tichida kushandisa maapplication eApple, Chero isu tinoshandisa CrossOver kana isu tinomirira Waini 3asi chichava chinhu chaicho pasina nguva Iwe haufunge kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Waini 3 ichaunza rutsigiro kune Android zvinoshandiswa
Yakanaka kwazvo »Waini Haisi Emulator», heh heh zvakadaro…. zvakare ndatenda neruzivo ... zvinhu zvikuru zvakatimirira newaini 3
https://anbox.io/ Kutarisira kuti wine3 inovandudza iyo, iyo inokutendera iwe kuti uise ese marudzi ese eapplication. mumudziyo paGNU / Linux